Auto Compact Sit-On Creeper - ၃၃၀ ပေါင်အထိကိုင်ထားပါ။
ထိုင် - ခရင်မ်
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / ထိုင် -In Creeper
ကြီးမားသောထိုင်ခုံပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ creeper ထိုင်ခုံ, tool ကိုဗန်းများနှင့်အံဆွဲထုတ်ချော်။ သင်ဤလှိမ့်အသေးစိတ်ရဲ့လှည်းပေါ်တွင်ကားဂိုဒေါင်နှင့်ကားလမ်းအုပ်ချုပ်လိမ့်မယ်။ တာရှည်ခံပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘီးများသည်ကားလမ်းနှင့်ကွန်ကရစ်အပေါ်တွင်တကယ့်ကိုကောင်းမွန်စွာလှိမ့်သွားသည်။ မော်တော်ယာဉ်အသေးစိတ်သို့မဟုတ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်များအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
separate သီးခြားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဗန်း ၃ ခု။
330 XNUMX ပေါင်အထိကိုင်ထားပါ။
a သတ္တုကိုယ်ထည်ပေါ်တွင်တာရှည်ခံ polyurethane
♣၎င်းသည်ကြံ့ခိုင်။ စုစည်းရန်လွယ်ကူ။ ထိုင်ရန်အဆင်ပြေသည်။
နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဆောက်လုပ်ရေး။ ဒါက သင်အနိမ့်နှင့်ညစ်ပတ်အသေးစိတ်သင်အားလုံးအတှကျစုံလင်သော tool ကို
နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အကိုင်များ။ သင်ကားဂိုဒေါင် (သို့) သင်၏ကားလမ်းတွင်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
Detailer ၏လှည်းကိုယ်ထည်သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး Ergonomically ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောထိုင်ခုံသည်ခဲယဉ်းသောပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
သငျသညျပွတ်သပ်ခြင်းနှင့်ဖယောင်း 2-3 နာရီဖြုန်းဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ အဆိုပါပလပ်စတစ်တစ်ခုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြံ့ခိုင်ခြင်းဖြင့်မျှမျှတတဖြစ်ပါတယ်
သံမဏိဘောင်နှင့်လေးလံသောတာဝန်လေးလက်မ casters ။ ကားဂိုဒေါင်ထဲ၌ဆေးကြောထားသောကြမ်းခင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
ထို့အပြင်ကြမ်းပြင်အပြင်ဘက်ကွန်ကရစ်ပေါ်တွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဘီးလေးဘီးနှစ်ချပ်သည်သော့ခတ်။ ကောင်းစွာသိုထားနိုင်သည်
အပြည့်အ ၀ ရှိသည့် FUOU creeper ကိရိယာနှင့်ဆွဲ။ ဆွဲ။ လွယ်ကူစွာရွေ့လျားနိုင်သောဖယ်ထုတ်နိုင်သောဗန်းနှစ်ခုနှင့်ဆွဲထုတ်ရန်။
ထို့အပြင်ငါတို့ကိုင်နိုင်သည့်ပုလင်းကိုင်ဆောင်သူများပါဝင်သည်စွဲစေခြင်းနှင့်အခြားအသေးစားကိရိယာများအတွက် creeper ၏အဆုံးဖြစ်စေ
၈ အောင်စသို့မဟုတ် ၁၆ အောင်စပုလင်း။ စုတ်တံ၊ လက်သုတ်ပုဝါနှင့်ပါတနာများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုအသေးစိတ်စီစဉ်ရန်သိုလှောင်ရေးအံဆွဲ၊
အဆိုပါ creeper ၏ဗဟိုယူထားသော။ သင်၏သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ creeper ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အထက်။ ဘရိတ်အပြောင်းအလဲ၊ ကားအသေးစိတ်သို့မဟုတ်အိမ်အနိမ့်ပိုင်းလိုအပ်သောအိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
အဲဒါကိုစာရင်းသွင်းချင်ပါသလား? ငါတို့အမြဲရှိတယ် ဒီမှာ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်
SIT-ON CREEPER, လှိမ့်အသေးစိတ် deterer's Cart, Creeper ထိုင်ခုံ / Tool ကို
ကုန်ပစ္စည်းအထူးအသေးစိတ်။ အသေးစားမော်ဒယ် / အလတ်စားမော်ဒယ်
ကုန်ပစ္စည်း Size ကို 375x360x260mm / 455x320x255mm
အဖုံး ၁ PC Creeper သည်မာစတာပုံးတစ်ခုထဲတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်
MOQ 400 သတ်မှတ်ပေးသည်
ကုန်ပို့ရက်စွဲ 3-4 ပတ်
အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူ့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ ကျေးဇူးပြု. ကား.